Dawladda federalka ah oo dhalleecaysay Somali lagu xiray Kenya & Kenya oo ka fiirsanaysa sii joogitaanka dalkeeda ee mas?uuliyiinta Soomaalida. – Radio Daljir
Dawladda federalka ah oo dhalleecaysay Somali lagu xiray Kenya & Kenya oo ka fiirsanaysa sii joogitaanka dalkeeda ee mas?uuliyiinta Soomaalida.
Janaayo 19, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Jan 19 ? Dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay tallaabadii dawladda Kenya ay ku xirxirtay boqolaal Soomaali ah, oo ay ku jiraan xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiil sar sare oo magac weyn ku leh dalka Soomaaliya.
Dawladdu xariggii boqolaalkii Soomaalida ahaa ee habeen hore iyo xalayba lagu xirxiray dalka Kenya, waxay ku micnaysay in uu ahaa mid lagu dagdagay oo aan si qumaati ah looga fiirsan, maadama aan la kala soocin dadkii sharciyada ku joogay dalka iyo kuwii sharci darrada ahaa iyo sidoo kalana mas?uuliyiintii dawladda iyo dadkii shacabka ahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Cali Axmed Jaamac ?Jaangali? ayaa sheegay dawlad ahaan in ay ka xumaadeen tallaabadii ciidamada ammaanka ee dawladda Kenya ay ku raafeen boqolaal Soomaali ah, waxaana uu intaas ku daray dawladda Kenya arrintaasi in ay ka wada-hadleen.
Wasiirka oo u warramay idaacadda VOA-da ayaa la weydiiyey falkaasi in ay dawlad ahaan cambaareynayaan iyo in kale, wuxuuna sheegay arrintu in aysan gaarin wali heer la isku cambaareeyo, hase ahaatee si sahlan loo dhammayn doono arrinta dhalisay xarigga boqolaal Soomaali ah.
Inkastoo dawladda Kenya ay siidaysay dad badan oo ay ku jiraan xildhibaanno iyo dad magac ku leh Soomaaliya, haddana xilliga wasiirku uu waraysigaan bixiyey xabsiyada dalka Kenya ayaa ku jiray dad badan oo Soomaali ah oo ay ka mid yihiin xildhibaanno baarlamaanka ka tirsan oo uu ka mid yahay Ismaaciil Hurre Buubaa oo mar ahaa wasiirka arrimaha dibadda dawladda Feferaalka ah.
Dhanka kale dawladda Kenya ayaa ku goodiday in ay ka fiirsanayso sii joogitaanka dalkeeda ee mas?uliyiinta dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo fariisin lixaad leh ku yeeshay magaalada Nairobi.
Dawladda Kenya, waxay u soo jeedisay mas?uuliyiinta Soomaaliya ee ku sugan dalka Kenya dhawr arrimood in ay mid u hoggaansamaan, midda 1-aad waxay Kenya ku sheegtay in ay qaxooti ahaan isku dhiibaan mas?uuliyiinta Soomaalidu oo loo aqoonsado, iyo in ay magan-galyo siyaasadeed dalka Kenya ku joogaan iyo sidoo kale in ay dalkoodii dib ugu laabtaan.
Dawladda Kenya, waxay sheegtay marnaba in aysan u dulqaadan doonin in fadhi ku dirir laga dhigto dalkeeda, isla markaana Keyna ay hooy u noqoto rag damacsan oo kaliya in ay xidida u xiibaan dawladda taagta daran ee Soomaaliya.
Hadalka dawladda Kenya ayaa ku soo aaday iyadoo labadii habeen ee ugu danbeeyey ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ay xabsida dhigeen boqolaal Soomaali ah oo ay ku jiraan mas?uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Dilalka madaxda dawlada oo ku soo kordhaya Puntland & dawladda oo wacad ku martay in ay tallaabo qaadi doonto.
Warbixin ku saabsan xildhibaano & saraakiil ka tirsan dawlada federaalka ah oo lagu xiray Kenya.